Bulawayo Agenda Yoronga Kusvitsva Nyunyuto kuHurumende
Kurume 02, 2011
Sangano reBulawayo Agenda rinoti riri kuronga kusvitsa gwaro renyunyuto kuvatungamiri vezvematongerwo enyika vari muhurumende, richivaudza kusafara kwaro nemhirizhonga iri kuitika munyika.
Bulawayo Agenda inoti ichatsvaga vanhu miriyoni imwe chete vachasaina gwaro raro risati rasvitswa kuhurumende. Chirongwa ichi chakatanga neChipiri mumatunhu eMatebeleland South, Matebeleland North, Midlands, Masvingo, nedzimwe nzvimbo munyika.
Hurongwa hweBulawayo Agenda hunoitika apo kushungurudzwa pamwe nekusungwa kwevanhu vanoshandira masangano akazvimirira uye nhengo dzeMDC inotungamirwa naVaMorgan Tsvangirai, kuri kuramba kuchienderera mberi.
Mukuru weBulawayo Agenda, Amai Anastasia Moyo, vanoti sangano ravo rinoda kuti hurumende igadzirise zviri kuitika munyika.
Masangano akazvimirira oga anonzi asangana neChitatu akashoropodza kubviswa kwaVaLovemore Moyo semutauriri weparamende. VaMoyo vakabviswa pachigaro ichi idare reSupreme Court, iro rakati kusarudzwa kwavakaitwa hakuna kuitwa nenzira kwayo.
Izvi zvinotevera nyaya yakanga yaiswa mudare nemumiriri weTsholotsho muparamende, VaJonathan Moyo, avo vakapikisa zvakaitika pakusarudzwa kwaVaMoyo. Nyaya iyi yakaraswa nedare repamusoro, asi VaMoyo vakapikisa izvi mudare repamusoro soro.
Hurukuro naAmai Anastasia Moyo